Multiple Apple and Tesla supplier factories in China had to halt production due to new energy consumption policy ﻿
Multiple Apple and Tesla supplier factories in China had to halt production due to new energy consumption policy
တရုတ်နိုင်ငံရှိ Apple နှင့် Tesla တို့ရဲ့ Supplier စက်ရုံအချို့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ပေါ်လစီစည်းမျဉ်းအသစ်ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့ရ
တရုတ်နိုင်ငံရှိ Apple နှင့် Tesla တို့ရဲ့ supplier စက်ရုံအချို့ဟာ ပိုမိုတင်းကြပ်လာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပေါ်လစီစည်းမျဉ်းအသစ်များကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ထုတ်လုပ်မှုများကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြရကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Apple ရဲ့ supplier ဖြစ်သူ Unimicron Technology Corp ရဲ့ပြောဆိုချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲ (၃) ခုကို ဒေသခံအစိုးရရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကန့်သတ်ရေး ပေါ်လစီကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့နေ့လည်မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ညသန်းခေါင်အချိန်ထိ ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်နားထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ ထုတ်လုပ်မှုရပ်နားခဲ့ရတဲ့ စက်ရုံများတွင် Foxconn ရဲ့ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Eson Precision Engineering, iPhone speaker အစိတ်အပိုင်းများရဲ့ supplier ဖြစ်တဲ့ Concraft Holding တို့အပြင် နာမည်ကျော်လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Tesla ကိုအစိတ်အပိုင်းများရောင်းချပေးနေတဲ့ စက်ရုံအချို့လည်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီ article လေးဟာ စာဖတ်သူပရိသတ်တို့အတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Still looking for your Dream job?
View all of our current vacancies NOW
Nilar Group Of Companies
VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose asacompany and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our b...
Show the postings (17)
Camusat Myanmar Co., Ltd
OUR MISSION: In an extremely dynamic technological environment, we help telecom actors to efficiently build and optimize their networks development by integrating traditional telecom technologies with...
Show the postings (4)
...Sweety Home Industry Co.Ltd established in Mandalay since 1995 is the professional manufacturing and distributing company of spring mattress, polyurethane foam, bedding accessories and modern pr...
Show the postings (31)
World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)
To stop the degradation of the planet's natural environment and to buildafuture in which humans live in harmony with nature, by: conserving the world's biological diversity; ensuring that the use of...
Show the postings (8)
.WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOMEOUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING9BIG SECTORS OF B...
Show the postings (20)
View All Actual Offers
V Net - Mandalay Internet Serv ...
Senior Executive (Customer ...
Phee Int'l Shipping Myanmar Lt ...
Project Sales & Marketi ...
Power Light Co.,Ltd
Finance Manager(Yangon) (Co ...
Property Manager/Facility E ...
Operation Manager (Foreign ...
Project Manager (Paragon Co ...
Modern Trade Manager
General Manager (Accounting ...
Trust Venture Partners Co., Lt ...
Senior Manager- Sustainabil ...
VPower Group Holdings Limited
Ve Ve Soft Drinks Factory
Sales Supervisor (Modern Tr ...
Education, Childcare & Teaching jobs
Hotel & Restaurant Jobs
Media,Digital & Creative jobs
Food & Beverages/Bakery Jobs
Construction & Property jobs
Maintainance and Production Jobs
Transport & Logistic jobs
Heavy Equipment /Machinery Operator Jobs
Sales - Engineer/Tech/IT Jobs
NGO, Charity & Voluntary jobs
Public Sector & Government jobs
Top Management Jobs
Food Tech/Nutritionist Jobs
Animals, Farming, and the Environment
Farming & Agriculture jobs
Oil/Gas Engineering Jobs
Win Thein & Sons Co Ltd.(148)
Global Technology Co., Ltd (Global Net)(75)
Strong Source Co., Ltd.(67)
BC Finance Ltd.(54)
AA Medical Products(53)
Apex Hospitality Group Co., Ltd(49)
Fair Deal Co., Ltd(49)
Good Brothers' Co., Ltd.(45)
Kaung Swann Htet Co.,Ltd(39)
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.(39)
IME International Co., Ltd(38)
Trust Venture Partners Co., Ltd(37)
The newest articles
5 Effective Strategies that will get youanew job
မိမိတို့လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကို သေချာပေါက်ရရှိနိုင်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် နည်းလမ်းများ
Ways to regain your productivity level after long holidays
ပိတ်ရက်ရှည်များအပြီးတွင် သင့်ရဲ့ Productivity ကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
4 Things You Need To Be Happpy At Work
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် ပျော်ရွှင်တက်ကြွမှုရှိစေဖို့အတွက် လိုအပ်သော အချက် (၄) ချက်
New video game company aims to develop therapeutic games
Video game ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုမှ ကုထုံးတစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးချနိုင်မည့် ဂိမ်းများကို develop ပြုလုပ်သွားရန် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိ
Activision brings Call of Duty: Warzone to mobile phones
Activision မှ Call of Duty: Warzone ကို mobile ဖုန်းများသို့ ဆောင်ကြဉ်းလာရန်ရှိနေ
8 lines Every Hard worker Wants to hear More from their Boss
သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပျော်ရွှင်အောင်ထားဖို့ဆိုတာ သူတို့အတွက် စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ရှိအောင် ထားနိုင်ရမယ့်အပြင်၊ သူတို့အတွက် ချီးမွန်းစကားတွေကိုလည်း ရံဖန်ရံခါ ပြောပေးဖို့ လိုအပ်တာအမှန်ပါပဲ။ ဒါဆို သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လိုချီးမွန်းစကားတွေပြောဆိုမလဲ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဝန်ထမ်းတွေ အကြားချင်ဆုံး စကားတွေကလာလည်းဆိုတာ သိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆို အဲ့ဒီစကားတွေဟာ ဘာတွေလည်းဆိုတာ သိရအောင် ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
10 Tips for Hiring and Retaining Gen Z Employees
မျိုးဆက်သစ်ဝန်ထမ်းများကို ခေါ်ယူဌားရမ်းခြင်းနှင့် အလုပ်ခွင်အတွင်းတည်မြဲမှုရှိစေရေးအတွက် အကြံပြုချက် (၁၀) ချက်
ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူကျတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုရှာမလဲ?
Cover Letter တစ်စောင်ကို မည်သို့ရေးမည်နည်း
How to create CV
အများသူငါတွေရဲ့ CV တွေထဲကနေ အလုပ်ရှင်များစီမှ ဦးစွာရွေးချယ်ဖတ်ရှုခြင်းခံရတဲ့ CVဟာ သေသပ်တိကျမှုနဲ့ အစီအစဉ်တကျရှိစွာ တည်ဆောက်ထားတဲ့CV တစ်ဆောင်ဆိုတာကတော့ ယုံမှားဖွယ်မရှိပါဘူး ။ အဲဒီအတွက် CVတစ်စောင်ကိုရေးသား တည်ဆောက်တော့ မယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်များကို ဂရုပြုစေလိုပါတယ်။
JobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites